Itoobiya oo bilowday inay Ciidammada kala baxdo goobo ka tirsan Somalia iyo Al-shabaab oo u weydaaratay – Xeernews24
Xooggaga ka tirsan Kooxda Al-Shabaab, ayaa gelinkii hore ee Salaasadii qabsaday deegaanka Ceel-Cali oo qiyaastii 75 Kiiloomitir dhinaca Galbeed kaga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ka dib markii ay halkaas iskaga baxeen Ciidammada Itoobiya ee ka tirsan kuwa Midawga Afrika ee Soomaaliya ka hawlgala.
SOMALIA: CIIDAMMADA ITOOBIYA EE AMISOM KA TIRSAN
Qabsashada Al-Shabaab ee Ceel-Cali, ayaa timid ka dib markii ay halkaasi banneeyeen Ciidammada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ee halkaasi gacanta ku hayay illaa badhtamihii sannadkii hore. Aroornimadii hore ee shalay ayaa Ciidammada Itoobiya oo ay wehliyaan Ciidammo yar oo Soomaali ah waxa ay iskaga baxeen Saldhigayadii Millateri iyo kuwii Maamulka ee deegaanka Ceel-Cali sida ay BBC-da u sheegeen dadka deegaankaas ee gobolka Hiiraan.
Ciidammada ka baxay Ceel-Cali waxay u baxeen dhinaca Beledweyne, waxaana la socda Xubnihii Maamulka ee deegaanka, sida ay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da oo soo xiganaysa dadka deegaanka faafisay xalay. Kooxo hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab oo markoodii hore-ba aan sidaa uga fogeyn Ceel-Cali, ayaa barqanimadii shalay galay magaalada iyagoo durbadiiba billaabay inay degaan Saldhigyadii iyo Xarumihii ay ka guureen Ciidammada Itoobiya.
Dadka deggan Ceel-Cali intooda badan Guryaha ayay ku jiraan oo dibedda umaanay soo bixin shalay. Inkastoo ay jiraan Odayaal la kulmay Saraakiisha Al-Shabaab oo kala hadlay sidii ganacsigii iyo noloshii magaalada caadi loogu soo celin lahaa.
Intii aanay ka guurin Ciidammada Itoobiya Ceel-Cali, waxaa Saldhiggooda lagu weeraray Madaafiic aan la ogayn inay khasaare geysteen iyo in kale. Ceel-Cali waa magaalo istraatiiiji ah oo isku xidha magaalada xarunta u ah gobolka Hiiraan ee Beledweyne iyo gobolka Bakool, waxaana Ciidammada ay qabsadeen halkaas badhtamaha sannadkii hore ee 2015.
Hase-yeeshee, badhtamaha bishii hore ee September Ciidammada Itoobiya waxay banneeyeen deegaanka Moqokori ee isla gobolka Hiiraan, iyadoo markiiba ay qabsadeen Al-Shabaab. Sidoo kale bilihii ugu danbeeyay Ciidammada Itoobiya waxay ka guureen Tuulooyinka Rab-dhuurre, Buur-dhuxunle iyo Garasweyne oo dhammaantood ka tirsan gobolka Bakool.
Sidoo kale, gobolka Galgaduud Ciidanka Itoobiyaanku waxay bilihii ugu danbeeyay ka guureen Saldhigyadii ay ku lahaayeen Galcad iyo Budbud oo ay hore iyaga iyo Ciidanka Soomaaliya oo is-garabsanayaa kala wareegeen ama ka qabsadeen Al-Shabaab, balse markii ay Ciidanka Itoobiya banneeyeen si nabad ama dagaal la’aan ah ay kula wareegeen Kooxda Al-Shabaab.
Ma jiro, War ka soo baxay Saraakiisha AMISOM iyo kuwa Itoobiya ama kuwa Soomaalida oo la xidhiidha ka bixitaanka Ciidammada Itoobiya ee AMISOM ka tirsan ee bannaynta ay Ceel-Cali iyo kuwii ka sii horreeyay ee ay Tuulooyin ka tirsan gobollada Hiiraan Galgaduud iyo Bakool.
Hase-ahaatee, bixitaankan u dambeeyay ee Ciidammadan AMISOM ka tirsan ee Itoobiya ka socdaa ku faaruqiyeen goobaha ay Soomaaliya ka joogeen, gaar ahaan gobolka Hiiraan, ayaa imanaya iyadoo dowladda Itoobiya ay wajaheyso Mucaaridad iyo Muddaaharadyo rabshado wata oo ka socda gudaha dalkaas tan iyo dabayaaqada sannadkii hore ee 2015.
Xukuumadda Itoobiya, ayaa shaacisay Lix bilood oo xaalad degdeg ah, ka dib muddo bilo ah oo ay si is-daba-joog ah u socdeen Muddaharaadyo rabshado wata oo Xukuumadda lagaga soo hor-jeedo, kuwaasoo ruxay gobolka dalkaas ugu weyn ee Oromiya iyo gobolka Axmaarada.
MUDDAHARAADYADA ITOOBIYA JOOGTADA KA NOQDAY 2016
Ugu yaraan 500 oo Qof, ayaa dhintay tan iyo markii ay Bannaanbaxyadu billawdeen bishii 11-aad ee sannadkii 2016-kii. Dhawaan waxaa waddanka Itoobiya soo maray isku dhacyo toddobaad socday, kuwaasoo u dhaxeeyey Booliska iyo Dad Muddaaharaadayey, ka dib markii 55 Qof ay ku dhinteen isbuurasho dhacday intii ay socotay Xaflad-dhaqameed ay dadka Oromadu xusayeen ama samaynayeen.
Balse, illaa hadda ma cadda xaaladda dhabta ah ama ujeeddada rasmiga ah ee ay Ciidammada Itoobiya ee AMISOMA ka tirsani goobaha ay kaga sugan yihiin gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya ugu bannaynayaan Kooxda Al-Shabaab oo goob kasta dagaal adag markii hore lagaga qabsaday dhammaan deegaannada Ciidanka Itoobiya u banneeyeen.
Hooyo Ku Nool Tuulada Toqoshi Ee Degmada Saylac Oo Gargraar Caafimaad U Yaboohisay... Madaxweynaha oo daahfuray mashruuca Nadaafada casriga ah ee Gobolka Banaadir...